Indawo epholileyo yokuziva ulungile kufutshane nesikolo sokuzingela saseTeutoburg
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguMedy
Wamkelekile kwiflethi yam epholileyo ezivayo!
Le ndlu ikumgangatho we-1 kwindlu yosapho lwe-2. Indawo yokuhlala inama-95 square metres. Inebalcony enkulu eneefestile ezinkulu ekhitshini elivulekileyo, igumbi lokutyela kunye negumbi lokuhlala, elenza ukuba indlu ibentle kwaye iqaqambe. Igumbi lokuhlambela elihle, eliqaqambileyo lixhotyiswe zombini ishawa kunye nebhafu onokuthi ujonge kuyo iinkwenkwezi. Igumbi lokulala elikhulu linebhedi ye-spring 1.80 x 2.00 m.
Eyona nto iphambili yegumbi lokuhlala / lokutyela elinekhitshi elivulekileyo elidityanisiweyo yi-loft evulekileyo enomnye i-180 cm ye-matrasi ekhululekile yokulala kunye nokuzipholela ngaphandle. Kukho iifestile ezinkulu ezi-2 zeVelux ngaphezulu kwebhedi, ukuze ukwazi ukubona isibhakabhaka kunye nehlathi elincinci elikufuphi ukusuka apho.
Igumbi lokuhlala eliqaqambileyo lidityaniswe nendawo yokutyela kunye nekhitshi evulekileyo edibeneyo.
Kwindawo yokuhlala kukho i-sofa ekhululekile kakhulu ukuba umntu omnye angalala. I-SmartTV enkulu ijinga edongeni.
Ungasebenzisa i-wifi ekhawulezayo kuyo yonke indlu.
Itafile yokutyela epholileyo enezitulo ezi-4 eziguquguqukayo ziphambi kwefestile enkulu engaphambili kwibalcony naphakathi kwekhitshi kunye negumbi lokuhlala. Enye indawo encinci yokutya enezitulo ezi-2 ecaleni kwesofa. Isitulo esiphezulu siyafumaneka kwiindwendwe ezincinci kakhulu.
Ungangena kwi-balcony enkulu ukusuka kwigumbi lokuhlala kunye nekhitshi.
Ikhitshi livulekele kwigumbi lokuhlala kunye negumbi lokutyela kwaye lixhotyiswe ngayo yonke into oyifunayo ekhitshini, kunye nomatshini wekofu weSenseo oneepoda zekofu ezaneleyo, iswekile kunye nobisi olusetotiweyo, i-orenji yobuchwephesha / i-lemon squeezer, i-microwave, iketile, i-toaster. . Isikhenkcisi, onokusisebenzisa, sisecaleni kwesango lokungena kwindlu.
Ukongeza kwindawo yokulala yomgangatho ochongiweyo, igumbi linamagumbi okulala ama-2 ngaphezulu - enkulu enebhokisi yebhokisi ye-180cm yebhedi ejonge kwigadi kunye nehlathi elidibeneyo elidibeneyo kunye negumbi leendwendwe elincinci elinebhedi eyi-140cm enomandlalo okhululekileyo. Kukho ibhedi yokuhamba yeendwendwe ezincinci.
Kwi-hallway kukho i-closet eyakhelwe-ngaphakathi, apho unokuxhoma iimpahla zakho kwaye uzifake ngaphakathi. Igumbi lokuhlambela elihle elineshawa kunye nebhafu nalo liphumile epasejini.
Kuzo zonke iindwendwe kusoloko kukho ilinen entsha yebhedi kunye neetawuli ezaneleyo. Kwigumbi lokuhlambela unalo nephepha langasese, kubandakanywa nephepha elimanzi, izicubu zobuso, ijeli yokuhlamba, ishampu kunye, ngokuqinisekileyo, isomisi seenwele.
IHololage ikwisithili saseOsnabrück. Yindawo yasemaphandleni ethandekayo. Ukusuka apha ungangena ngokukhawuleza kwindalo kodwa ukonwabela ngokukhawuleza ubomi besixeko sase-Osnabrück. Le ndlu ikwindlu yosapho olu-2 kwisitrato esithe cwaka ecaleni kwenkuni encinci. Ngakolunye uhlangothi lwesitrato, indawo enkulu yehlathi iqala emva kwezindlu, apha unokuthatha uhambo oluhle kwaye ucoce ingqondo yakho. Umbindi wedolophu oneevenkile, iibhaka, iikhemesti ... unokufikelelwa ngemizuzu eyi-10 ngeenyawo.
Uhambo oluninzi oluhle kwindawo ejikelezileyo lunokuqaliswa ukusuka eHollage.
Umbuki zindwendwe ngu- Medy
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Wallenhorst